बादल : मतदान सम्पन्न नहुँदै भूतपूर्व मन्त्रि, खिमलाल र उनिमध्य कसले जित्ला ? - Himali Patrika
बादल : मतदान सम्पन्न नहुँदै भूतपूर्व मन्त्रि, खिमलाल र उनिमध्य कसले जित्ला ?
हिमाली पत्रिका ६ जेष्ठ २०७८, 5:24 pm
राष्ट्रियसभाको बागमती प्रदेशतर्फको सदस्यका लागि उपनिर्वाचन सुरु हुँदा रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री थिए । तर, मतदान सम्पन्न नहुँदै उनी भूतपूर्व भइसकेका थिए । अब चुनावमा जित हासिल गर्न नसके उनको गृहमन्त्री पद फर्कने सम्भावना रहनेछैन । सर्वोच्च अदालतले सांसद नभएका व्यक्तिलाई दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक ठहर गरिसकेको छ ।
अब गृहमन्त्री बन्न बादलले आजको चुनावमा जित्नैपर्छ । सम्भवत साँझ ६ बजेसम्म मतपरिणाम आइसक्छ । बादलका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी डा.खिमलाल देवकोटा छन् । बादलको सुर्य चिन्ह हो भने खिमलालको कलम । बादल एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार हुन् भने खिमलाल माधवकुमार नेपाल निकटस्थ हुन् ।
खिमलाललाई काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र माधव नेपाल समूहको साथ छ । नेपाल समूहका मतदाताले खिमलाललाई मत दिएको हो भने उनले नै चुनावमा जित हासिल गर्ने सम्भावना बलियो छ ।
नेकपाभित्र जनप्रतिनिधिमा माधव नेपालको बागमती प्रदेशमा बलियो उपस्थिति छ । तर, एमालेको मत एकै ठाउँमा खसेको हो भने बादलले जीत हासिल गर्नेछन् । उनलाई राप्रपाको समेत मत परेको छ । माओवादी केन्द्रका केही जनप्रतिनिधि पनि बादललाई मत हाल्न पुगेको अनुमानहरु भएका छन् । काँग्रेसबाट जनप्रतिनिधि भएका मतदाताले भने खिमलाललाई मत हालेका छन् ।
मतदानमा प्रदेश सभा, नगरपकालिका र गाउँपालिकाका गरी १० जनप्रतिनिधि अनुपस्थित रहे । जसमध्ये ४ प्रदेश सभा सदस्य छन् भने बाँकी ६ स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि हुन् ।
बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको उपनिर्वाचनमा ३४७ मध्ये ३३७ ले मतदान गरे । प्रदेश सभाका १०९ र स्थानीय तहका २३७ जनाले मतदान गरे । प्रदेश सभा सदस्यमध्ये विवेकशील साझाका ३ र माओवादी केन्द्रका १ जना अनुपस्थित रहे । काँग्रेसबाट स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि २, नेमकिपाका १ जना अनुपस्थित रहे ।